साफु'रोगले आँखाको ज्योति गुम्ने खतरा ~ FMS News Info
साफु'रोगले आँखाको ज्योति गुम्ने खतरा
काठमाडौं: केही दिनअघि गोरखाका ६ वर्षीय सुरज (नाम परिवर्तन) ले राम्रो देखेपछि सेतो पुतली छोपेर खेलाउन थाले। एकैछिनमा उनको आँखा बिझाउन थाल्यो। आमा आएर हेर्दा उनको एउटा आँखा रातो भइसकेका थिए।
तत्कालै उनलाई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याइयो । स्वास्थ्यकर्मीले त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उनलाई काठमाडौंको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा रेफर गरे। तिलगंगा आइपुग्दा उनको आँखामा संक्रमण फैलिसकेको थियो । उपचारपछि उनको आँखामा केही सुधार आए पनि अझै तीनचार महिना चिकित्सकको निगरानीमा बस्नुपर्ने भएको छ।
दोलखाका ४३ वर्षीय महेश (नाम परिवर्तन) को पनि सुत्ने तरखर गरिरहेका बेला एक्कासि आँखा बिझाउन थाल्यो। बत्ती बालेर हेर्दा उनको हातमा मरेको सेतो पुतली भेटियो। त्यही पुतलीको झुस आँखामा झर्न पुगेको अनुमान गर्दै उनी आत्तिएर नजिकैको स्वास्थ्य संस्था पुगे।
तीन दिनसम्म स्वास्थ्यकर्मीले महेशको आँखाबाट पुतलीको झुस निकाल्ने प्रयास गरे। निको नभएपछि उनलाई पनि काठमाडौंको लिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा रेफर गरियो।
प्रतिष्ठानमा पुग्दा उनको आँखामा पनि संक्रमण फैलिइसकेको थियो। सुरज र महेश दुवैको आँखामा यसापालि मौसमभन्दा छिटो देखा परेको डरलाग्दो रोग साफु (सिजनल इन्डोथाल्माइटिस) पुष्टि भएको छ।
पछिल्लो समय यस्ता समस्या लिएर प्रतिष्ठानमा पुग्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। एक महिनायता प्रतिष्ठानमा साफुबाट आँखामा संक्रमण फैलिएका सुरज र महेशसँगै अन्य ६ जना बिरामीको उपचार सुरु गरिएको छ। ती बिरामीमा साफु देखिनुमा सेतो पुतली कारक मात्रै नभएको चिकित्सक बताउँछन्।
‘कसैकसैलाई मात्र सेतो पुतलीका कारण साफुको संक्रमण फैलिएको पाइएको छ सबैमा होइन, यो रोग पूर्ण रूपमा के कारणले फैलिन्छ भन्ने अहिलेसम्म वैज्ञानिकले पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनन्', प्रतिष्ठानका नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. अनु मानन्धरले भनिन्, 'त्यसैले सेतो पुतलीका कारण मात्र यो रोग फैलिन्छ भन्नु गलत हो । कारण जे भए पनि हामी कसरी यसबाट बच्ने भन्ने तर्फ हामी लाग्नुपर्छ।
यो रोग संक्रमणको उच्च जोखिममा सबैभन्दा बढी पहाडी भेगका बालबालिका परेको चिकित्सक बताउँछन् । यो रोगको संक्रमणका कारण अति छिटो आँखाको ज्योति गुम्ने सक्ने खतरा रहन्छ।
प्रतिष्ठानको पछिल्लो १० वर्षको अध्ययनमा हरेक वर्ष साफुको समस्या लिएर उपचारका लागि आउनेमध्ये ३० प्रतिशत बिरामीको आँखाभित्र कीटाणुको संक्रमण भेटिने गरेको छ। हरेक वर्षजस्तो असोजदेखि मंसिरसम्म देखिने गरेको साफु यसपालि साउन तेस्रो साताबाटै देखिन थालेपछि विज्ञहरूले सचेत रहन सुझावसमेत दिएका छन्।
डा. मानन्धरले साफुबाट धेरै बालबालिकाको आँखाको ज्योति गुम्ने जोखिम रहेको भन्दै अभिभावक र बालबालिका सचेत हुनुपर्ने बताइन्। ‘तत्काल सचेतनाका कार्यक्रम सम्भव नभएकाले व्यक्ति आफै सचेत हुनु पर्ने देखिएको छ,' मानन्धरले भनिन्, ‘किनभने रोग लाग्नेबित्तिकै उपचार गरे सम्भव छ।'
उनका अनुसार एउटा आँखा अचानक रातो हुनु, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुनु, आँखाको कालो भागको बीच भागमा सेतो देखिनु अत्यन्तै छोटो समयमा ज्योति ज्यादै कम हुँदै जानु, दुखाइ त्यति धेरै नहुनु तथा झट्ट हेर्दा साधारण आँखा पाक्ने जस्ता समस्या देखिए तापनि चिप्प्रो मुख्य लक्षण भएको यो रोगबाट छिट्टै आँखाको ज्योतिसमेत गुम्न सक्छ।
यो रोग लागेको आँखाको भित्री भागमा पाकेर पीपसमेत भरिन्छ।डा. मानन्धरले उक्त रोगबाट नवजात शिशुको आँखामा समेत संक्रमण फैलिएकाले सचेतना आवश्यक रहेको बताइन्। 'यो रोगबाट बच्न पुतलीको सम्पर्कबाट बालबालिकालाई टाढा राख्‍नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'घरवरिपरि सेतो बत्तीको प्रयोग कम गर्नुपर्छ। झुल हालेर सुत्न पनि सबैलाई आग्रह गर्छु।'
Labels: Featured, Health, News